Global Voices teny Malagasy » Arabia Saodita: Avoahy Fouad – Vaovao fanampiny · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Desambra 2007 16:19 GMT 1	 · Mpanoratra sami ben gharbia Nandika Hery
Sokajy: Arabia Saodita, Fahalalahàna miteny, Zon'olombelona
Toa izao ny taratasy  nosoratan'i Fouad Alfarhan , talohan'ny nisamborana azy. Izy dia ilay mpitoraka blaogy malaza  avy any Arabia Saodita, voasambotra  to Jeddah tamin'ny 10 desambra 2007 lasa teo, noho ny fahasahiany sy ny fanehoany fahalalahana niteny tao amin'ny blaoginy malaza iray alfarhan.org  :
Tsy vao voalohany izao no nahita olana teo amin'ny mpitondra Saodita i Fouad. Tamin'ny herintaona izy dia efa nohadihadian'ny polisy manao sivily ary noterena mba hanidy ny blaoginy . Rehefa niato kely volana vitsivitsy i Fouad dia nanapakevitra hanohy hi-blaogy indray.
Maro ireo mpitoraka blaogy sy ireo namana mafana fo no manao antso avo hanafahana an'i Fouad amin'ilay hetsika ao amin'ny freefouad.com . Hatramin'izao dia efa mahatratra 295 ny mpikambana mivondrona ao amin'ny mpanohana izay noforonina ao amin'ny Facebook .
Araka ny filazana izay nataony ny 24 desambra 2007, dia manameloka ny fitazonana tsy ara-dalàna an'i Fouad Alfarhan ny Tambazotran'ny Arabo momba ny Zon'Olombelona (The Arabic Network for Human Rights Information ) ary manainga ny mpitondra Saodianina mba hilaza ny antony marina nisamborana azy. “Rehefa misambotra tanora manoratra mazava sy manohitra ny terorista ary mitady fanovana toa izao ny mpitondra fanjakana Saodiana, dia fanehoana matotra izany hoe efa lasa lavitra ary manenika an'i Arabia Saodita mihitsy ireo fanatika sy ireo manohitra ny fahafahana sy fahalalahana eo amin'ny fahazoa-miteny ary ny fanavaozana.” hoy ny tale-n'ny Tambazotran'ny Arabo momba ny Zon'Olombelona, Atoa. Gamal. Nosoratan'i Sami Ben Gharbia 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2007/12/27/356/
 hanidy ny blaoginy: http://web.archive.org/web/*/http://www.daralasr.com/blog